Vohitr'Andriana - Wikipedia
Ny vohitr'andriana dia tanàna nonenan'ny andriana merina faha mpanjaka, ka isan'ireo ny tanàna miorina eo amin'ireo tendrombohitra roa ambin'ny folo sy ny tanàna hafa izay miorina manodidina an'Analamanga.
Ny Ntaolo dia nanana ny fahendreny notoaviny amanjato taona nandaminany ny toerana azon’ny olona tsirairay honenana eo amin’ny tendrombohitra 12 sy ny vohitr’andriana. Diso arak’izany ny filazana fa andriana avokoa ny tompon-tanindrazana eo amin’ny vohitr’andriana misy rova iray satria misy hova sy mpanompo koa monina eo. Ny toerana azo onenana dia miankina amin’ny firazanana sy ny fizokian’ny fianakaviana tsirairay eo amin’ny vohitra. Tsy misy noho izany olona afaka monina eo amin’ny toerana tsy mifanentana amin’ny satany. Ny tsy fanajana na ny fitsimbadihan’izany rindran-damina izany dia noheverin’ny Ntaolo hitondra faharatsiana eo amin’ny tontolony sy ny fiainany. Arak’izany, misy zara-tany azo sy tsy azon’ny andriana honenana amin’ny vohitr’andriana indrindra raha misy rova.
Voahodidina hadivory ny vohitr’andriana ka navahan’ny Ntaolo ho anaty hady (faritra voahodidina hadivory) sy ivelan-kady (faritra ivelan’ny hadivory).
1 Fandaminana ny faritry ny vohitr'andriana
1.1 Faritra voahodidina hadivory amin'ny vohitr'andriana misy rova
1.2 Faritra ivelan'ny hadivory amin'ny vohitr'andriana misy rova
1.3 Vohitr'andriana na tananan'andriana tsy misy rova voahodidina hadivory
2 Ny lafin-tany mitaha amin'ny vohitr'andriana
2.1 Toerana azon'ny Andriana aleha raha mifindra lavitry ny Vohitr'andriana
2.2 Ny avaratra sy atsimo amin'ny Vohitr'andriana
3 Ny fizaran-tany amin'ny vohitr'andriana malaza maromaro
3.1 I Alasora
3.6 Vohitry ny Zanadralambo amin'Andrianjaka
3.17 Ny atsimo amin’ny vohitr’andriana
4 Ny avaratra sy ny avaradrova ary ny avarabohitra
4.1 Fonenana amin’ny avaradrova sy avarabohitra
4.2 Ny hasin'ny avaratra
Fandaminana ny faritry ny vohitr'andriana[hanova | hanova ny fango]
Faritra voahodidina hadivory amin'ny vohitr'andriana misy rova[hanova | hanova ny fango]
Toy izao ny fizarany: eo afovoany ny rova izay faritra misy ireo lapa fonenan’ny ankohonan’ny andriana tompon’ny vohitra sy ny fasany. Ny sisa amin’ny faritra voahodidina hadivory amin’ny vohitr’andriana misy rova dia nozarain’ny Ntaolo ho avaradrova, atsimondrova, antsinanandrova ary andrefandrova. Ny andriana avo razana eo amin’ny fanjakana dia amin’ny avaradrova no mahazo monina ary matetika ny avaradrova dia natokan’ny andriana tompon’ny vohitra ho zara-tanin’ny andriana avo razana akaiky azy. Ireo andriana sisa dia namponenin’ny andriana tompon’ny vohitra amin’ny vohitra hafa ao anatin’ny faritry ny fanjakany. Ny antsinanandrova dia zara-tany honenan’ny hova avo razana ary ny atsimondrova sy andrefandrova dia zara-tany honenan’ny hova iva razana sy ny mpanompo.
Faritra ivelan'ny hadivory amin'ny vohitr'andriana misy rova[hanova | hanova ny fango]
Ny faritra ivelan'ny hadivory amin'ny vohitr'andriana misy rova dia nozarain’ny Ntaolo ho avarabohitra, atsimombohitra, antsinanambohitra ary andrefambohitra. Ny avarabohitra dia natokana ho zara-tanin’andriana ka raha hanorin-tanàna na trano ivelan’ny hadivory ny andriana dia amin’ny avarabohitra no azony hanorenana. Talohan’i Radama I (1810-1827), ny avarabohitra dia zara-tanin’ny andriana avo razana akaiky indrindra ny andriamanjaka ka tsy misy hova na mpanompo mahazo monina eo. Vokany, ny avarabohitry ny vohitr’andriana iray dia mety ahitana vohitr’andriana iray na roa. Matetika dia tsy asiana monina amin'ny antsinanandrova fa raha misy monina dia ireo hova avo razana no monina eo. Ny atsimombohitra sy andrefambohitra kosa dia natao hoan’ireo hova iva razana sy ny mpanompo.
Misy ankavitsiana anefa ireo andriana monina amin’ny faritra tsy mendrika azy noho izy ireo hova natao ho andriana na andriana nandrorona.
Vohitr'andriana na tananan'andriana tsy misy rova voahodidina hadivory[hanova | hanova ny fango]
Ny vohitr’andriana tsy misy rova dia azon’ny andriana honenana na avaratra na atsimo na andrefana na antsinana ao amin’ny vohitra na anaty hady na ivelan-kady. Matetika anefa ny teraky ny andriana mihevi-tena ho avo razana no monina amin'ny ilany avaratra amin'ny vohitra.
Ny lafin-tany mitaha amin'ny vohitr'andriana[hanova | hanova ny fango]
Toerana azon'ny Andriana aleha raha mifindra lavitry ny Vohitr'andriana[hanova | hanova ny fango]
Raha mandao ilay vohitr’andriana ny andriana iray dia afaka mianatsimo, miakandrefana, miantsinanana. Andrianjaka, dia niala teo Ambohidrabiby ka nianavaratra andrefana teny Ambohimanga vao nianatsimo nanorina an’Antananarivo. Andrianentoarivo dia niala teo Ambohimalaza ka niakandrefana tonga nanjaka tany Vonizongo.
Ny avaratra sy atsimo amin'ny Vohitr'andriana[hanova | hanova ny fango]
Amin’ny Ntaolo, amin’ny vohitr’andriana misy rova, ny avaratra dia tsy ilay avaratra tondroin'ny famantaranavaratra akory ary ny andrefana sy atsinanana dia tsy faritana araka ny lalan’ny masoandro (izay miovaova isaiky ny vonin’andro). Ny fitodiky ny lapa na ny tranomasina no mamaritra ny ivo, avaratra, atsimo, atsinanana ary andrefan’ny vohitr’andriana sy ireo vohitra manodidina miray aminy. Ny lapan’andriana sy ireo trano masina dia misy lavany roa mitodika avaratra-atsimo sy sakany roa mitodika antsinanana-andrefana. Ny lavan’ny lapa izay misy ny varavarambe, no rindrin-trano andrefana ary ny tany rehetra manoloana izany no andrefandapa, andrefandrova sy andrefambohitra. Ny lavan’ny lapan’andriana tsy misy varavarambe, no rindrin-trano antsinanana ary ny faritra rehetra manoloana izany no antsinanan’ny lapa, antsinanandrova sy antsinanambohitra. Ny sakan’ny trano akaikin’ny varavarambe no sakany atsimo ka ny tany manoloana izany no atsimon’ny lapa, atsimondrova sy atsimombohitra ary ny sakany lavitra ny varavarambe mifanohitra amin’ny sakany atsimo no sakany avaratra ka ny tany rehetra manoloana izany no avaradapa,avaradrova sy avarabohitra. Ao anaty lapa kosa dia mianavaradoha ary mianatsimo tongotra ny Mpanjaka raha mandry. Zoro fisandratana ny avaratra teo amin’ny Ntaolo ka ny andriana ihany no noheveria hanana zo amin’izany.
Ny fizaran-tany amin'ny vohitr'andriana malaza maromaro[hanova | hanova ny fango]
I Alasora[hanova | hanova ny fango]
Renivohim-panjakan’Andriamanelo (taonjato faha-16) i Alasora. Teo Ambohitrandriananahary, ampita avaratr’antsinanan'Alasora no nanorimbohitra i Andriamananitany izay natao hanjaka handimby an’Andriamanelo rahalahiny. Teo Ambohibe, toerana avaratr’Alasora no napetrak’Andriamanelo i Andriandranandobe zaodahiny. Ary i Ralambo zanak’Andriamanelo dia nandao an’Alasora koa nianavaratra nankeo Ambohidrabiby. Arak’izany, ny faritra avaratr’Alasora no nitoeran’ireo andriana telo avo razana indrindra tamin’ny fanjakan’Andriamanelo.
Ambohidrabiby[hanova | hanova ny fango]
Ara-tantara, tamin'i Rabiby (nanjaka 1500-1550) no niorina ny rova nisy ny lapa. Tamin’i Ralambo kosa no nozaraina ny faritra manodidina ny lapa sy ny rova. Ny avaradapa, ny avaradrova, ny vaki-kady avaratra ary ny ambany avaratr’Ambohidrabiby dia nomen-dRalambo ny Andriandoriamanjaka, zafin'i mpanjaka Rabiby sy Ramaintsoakanjo, ireo Andriandoriamanjaka moa dia nataondRalambo ho zanakandriana mahazo manjaka ny firazanany no mpanolotsainy rahateo. Tamin'ny faran'ny taonjato faha 18 dia napetrak'Andrianampoinimerina teo androvan'Ambohidrabiby i Rasendrasoa vadibeny sy amanjanany. Tsy novain'Andrianampoinimerina ny zara-tany nataon-dRalambo teo Ambohidrabiby: ny avara-dapa hatrany ambany avaratr'Ambohidrabiby an'Andriandoriamanjaka, ny atsimondrova hatrany ambany atsimo an'i Zanadralambo. Ny antsinanandrova hatrany ambany antsinana dia an'i Zanakarivonivahoaka sy Andriandapamananihasina ary Ambohinanjakana. Ny andrefan'ny rova hatrany ambany andrefana dia misy ny terak'Ilehilava sy Ambohijina ary antokomaro. Ao androva koa no misy ireo fasan'andriana mitandahatra avaratra-atsimo ka ny fasan'i Rasendrasoa vadiben’i Andrianampoinimerina sy mianakavy no avaratra indrindra, ny fasan-dRabiby mivady sy Andriandambotanimanjaka no eo afovoany ary ny fasan-dRalambo mivady no eo atsimo.
Ambohimalaza[hanova | hanova ny fango]
Ara-tantara, Ambohitraivo no isan’ny renivohim-panjakana natanjaka indrindra taty Imerina ankoatran'Ambohidrabiby izay renivohimpanjakan'ny Mpanjaka (nanjaka 1575-1610 aorian'i JC). Resin-dRalambo anefa i Andrianafovaratra mpanjakan’Ambohitraivo koa ho fanamrihana izany dia Ambohimalazabe izay toerana eo avaratr'Ambohitraivo no nofinidin-dRalambo honenan’Andriantompokoindrindra zanany lahimatoa sy Ravaomasina, ary Ambohitraivo eo atsimo kosa dia novain'dRalambo ho Imerikasinina no anarany. Ny taranak’Andriantompokoindrindra sy Ravaomasina kosa dia nifindra teo ampita avaratr’Ambohimalazabe, eo amin'ilay toerana atao hoe Ambohimalaza. Teo Ambohimalaza kosa: amin’ny ilan'andrefan'Ambohimalaza no nonina ny taranak’Andriantompokoindrindra ka ny ilany avaratra no an’ny taranak’i Ratompoinandriana sy Andriandambo, lahimatoa sy lahiaivon’ i Andriantompokoindrindra ary ny ilany atsimo kosa no an’ny taranak’Andriamahatsiravina zanaka faralahin’Andriantompokoindrindra. Misy lovantsofina aza milaza fa ireo taranak’Andriantompokoindrindra monina amin’ny io avaratra io dia andriamasinavalona sy zazamarolahy ny firazanany. Arak’izany, noporofoin’Andriantompokoindrindra fa ny andriana dia mianavaratra hatrany ary ny avo razana no monina amin’ny avaratra indrindra eo amin’ny vohitra. Ny ilany antsinanan'Ambohimalaza kosa dia ny terak'i Ravaomasina no nonina teo.
Vohitr'Andrianamboninolona[hanova | hanova ny fango]
Tamin’ny voalohan’ny taonjato faha -16 aorian’ny JC, Rangita sy Rafohy dia nandidy fa ny alakamisy an’Andriamanelo ary ny zoma an’Andriamananitany. Ho fanamarihan’Andriamananitany fa izy no hanjaka aorian’Andriamanelo rahalahiny dia teo ampita avaratr’Alasora, teo Ambohitrandriananahary no naoriny ny tanànany. Ny lovantsofina ofisialy dia mampiseho fa raha nifindra monina niala an’ambohitrandriananahary ny sasany tamin’Andrianamboninolona dia nianavaratra hatrany dia tao Ambohitrombihavana, Ikilonjy, Fieferana, Ambonisoa.
Vohitr'Andriandranando[hanova | hanova ny fango]
Rehefa nifanaraka sy nifampizaodahy ny mpanjaka Andriamanelo ( nanjaka alohan'ny 1575 aorian'i JC) sy Andriandranandobe lehiben’ny fianakaviana andriana tonga taty Imerina tamin’ny faran’ny taonjato faha-16 ap Jc, dia napetrak’Andriamanelo teo antampon’Ambohibe i Andriandranandobe ary tsy noetsehin-dRalambo teo intsony izy. Nozarain’Andriandranandobe telo Ambohibe sy ny manodidina ka Ambohimailala, vohitra avaratra indrindra no zara-tanin’ny lahimatoany sy ny taranany. Ambohibe eo afovoanyy kosa no anjaran’Andriratompoinandriana zanany lahiaivo sy ny taranany. Ary Manankasina vohitra atsimo indrindra no no zara-tanin’ny zanany faralahy sy ny taranany. Arak’izany, ny zara-tany nataon’Andriandranandobe dia manaja ny fizokiana izay mahazo ny avaratra indrindra amin’ny vohitr’andriana. Tamin’ny taonjato faha-19 vao nidina sy nonina teny amin’ny toerana iva manodidina an’Ambohibe ireo taranak’Andriandranandobe.
Vohitry ny Zanadralambo amin'Andrianjaka[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny nanjakan-dRalambo (1575-1610) Andriampolofantsy, Andriampanarivomanga, Andriamasoandro ary Andriatompombe no zana-dRalambo nantsoina hoe Zanadralambo amin'Andrianjaka ka Ambohidrabiby no lahimatoa. Namponenin'ny mpanjaka Ralambo nanodidina ny renivohimpanjakany teo Ambohidrabiby izy efa-dahy. Koa Andriampolofantsy lahimatoany dia napetrany tao Ambohimanarivo eroa avaratr'Ambohidrabiby akaikin'ny Talata volonondry . Tato aoriana Andriampolofantsy vao nifindra monina teo Antsomangy. Rehefa tao antsomangy Andriampolofantsy dia nomeny zaratany ireo zanany ka teo Andafiavaratra no nonina ny zanaka lahimatoan'Andriampolofantsy ary teo Ambaniatsimo kosa ny zanany faralahy.
Anosiarivo[hanova | hanova ny fango]
Ramisamanjakarivo zanak'i Rangorinimerina no nanorina ny tanàna. Saingy matin'ny nendra i Ramisamanjakarivo ka tsy mba milevina ao anatirovan’Anosiarivo fa ery amin’ilay tanàna kely farany avaratra amin’ny Menakeliny, atao hoe Ambohinomena (nafohezina ho Ambohinome) izay rakotry ny amontana no ilevenany, fa tanànany koa io. Amin'ny fitomiandalan'Anosiarivo, ny fasan-dRalaitsirofo, lehiben’ny Andriambaventy no zanak’Andriantsimandrasa lahimatoan'i Ramisamanjakarivo, no avaratra indrindra amin'ny fitomiandalana.
Ambohimanga[hanova | hanova ny fango]
Ara-tantara, Andriamborona (taonjato faha-17), taranaky ny mpanjaka Andriambahoaka avy any Imamo no nanorina ny tanàna voalohany tao izay teo Mahazaza. Nobodoin'ny mpanjaka Andriatsitakatrandriana sady nametrahany ny zanany naterany anefa i Mahazaza koa nifindra monina teo ambony avaratr'i Mahazaza i Andriamborona. Nalain'Andriatsitakatrandriana indray io tanànan'Andriamborona teo ambony avaratra io sady nanorenany rova dia ny rovan'Ambohimanga ankehitrio, fa Andriamborona kosa dia naverin'Andriatsitakatrandriana honina eo atsimon'ny rova dia ao Mahazaza ihany. Ao anaty rovan'Ambohimanga kosa dia lapa telo no sisa mijoro ka ny lapa tranainy indrindra dia ny lapa Mahandrihono an'Andrianampoinimerina no atsimo indrindra. Eo avaratry Mahandrihono kosa ny lapa Fandriampahalemana an'ny Mpanjaka Ranavalona I sy ireo mpanjaka nandimby azy ary milahatra amin'ny lapa Fandriampahalemana eo avaratra andrefan'ny Mahandrihono ny lapa Tranofitaratra an'ny Praiminisitra. Ao anaty rovan'Ambohimanga ihany dia milahatra atsimo mianavaratra ny fasan'ny mpanjaka ka ny fasan'ny mpanjaka tranainy no amin'ny atsimo indrindra dia ny fasan'Andriambelomasina sy Andrianampoinimerina. Ny fasan'ny mpanjaka tamin'ny taonjato faha-19 kosa no amin'ny avaratra indrindra.
Lohavohitra[hanova | hanova ny fango]
Izy no renivohitry ny fanjakana vonizongo tamin’ny faran’ny taonjato faha-15 ka hatramin’ny taonjato faha-18. Ny fasan’ireo andriana nanorina an’i Lohavohitra dia eo amin’ny amin’ny ilany avaratra, toerana avo indrindra, ao antampon’ny Lohavohitra. Andrianentoarivo teo Lohavohitra dia niteraka roalahy dia Andriamosanja, lahimatoa, sy Andriahampimanjaka, faralahy. Nosasahan'Andrianentoarivo roa i Vonizongo ka ny antsasany avaratra nomeny an'Andriamosanja ary ny antsasany atsimo nomeny an'Andriahampimanjaka.
Antananarivo[hanova | hanova ny fango]
Teo Ambohimitsimbina no nisy ny rova tany amboalohany (voalohan’ny taonjato faha-17) vao nafindra teo avaratr’Ambohimitsimbina amin’ny toerana misy ny rovan’Antananarivo ankehitrio. Tao anatin'ny rova dia maro ireo lapa niorina ka saika niorina atsimo nianavaratra izy ireny ka ny lapa tranainy indrindra no any atsimo indrindra ary ny lapa tanora indrindra no avaratra indrindra ka toy izao izany: eroa atsimo indrindra i Besakana izay naorin'Andrianjaka; teo avarabaratr'i Besakana kosa no naorin'Andrianampoinimerina i Mahitsielafanjaka sy Felatanambola (ity Felatanambola ity dia efa rava ka teo no nanorenana an'i Manjakamiadana);teo avaratr'i Mahitsielafanjaka kosa no naorin-dRadama I ny Tranovola ho tranon-dRasalimo; teo amin'ny Felatanambola fahiny no naorin'dRanavalona I i Volamahitsy izay lasa Manjakamiadana rehefa nofonosina vato; ary farany ny Tranovola izay tranon-dRasalimo sy avaratra indrindra dia nataon-dRanavalona I ho tranon-dRakoto zanany (Radama II) fa i Manampisoa kosa dia teto atsimon'i Manjakamiadana no naorin-dRasoherina ( io Manampisoa io no exception). Tamin'i Radama I dia nisy rova miisa 2 teo Antananarivo ka ny "Rova atsimo" dia ireo misy ny lapa tranainy toa an'i Besakana sy ny manodidina azy. Ny " Rova avaratra" kosa izay nataon'i Radama hisy ny lapany dia eo avaratry ny rova atsimo. Ny lapa tamin'i Rova atsimo no natao fametrahana ny fatin'ny Mpanjaka niamboho nanomboka tamin'i Radama I.
Teo Antananarivo hatrany dia Andrianjaka no nanorina fasana voalohany tao an-drova ka ireo mpanjaka nandimby azy izay nanorimpasana teo dia nanao ny azy ireo teo avaratry ny fasan'ny mpanjaka nialohavany, ireo no fasana fito miandalana ka amin'izany,ny fasana tranainy indrindra no atsimo indrindra. Na dia tsy nilahatra tamin'ireo fasana fito miandalana ireo aza ny fasan'ny mpanjaka lahy sy vavin'i Madagasikara tamin'ny taonjato faha-19 dia milahatra manao avaratra atsimo izy ireo ka ny fasan'ny lahy no eo avaratra ary ny fasan'ny vavy no atsimo.
Teo Antananarivo ihany, Andriatsimitoviaminandriandehibe nanjaka teo tamin'ny taonjato faha-18 dia nanana zanaka roalahy dia Lambotsitakatra sy Andriamasinavalona, koa nozarain'Andriatsimitoviaminandriandehibe roa ny fanjakany ka Antananarivo, Ambohimanga sy Ambohidrabiby ary ny avaratra rehetra amin'ny fanjakany dia nomeny an'i Lambotsitakatra zanany lahimatoa ary Alasora, Ambohimanjaka sy Antanamalaza, sy Fandana sy Ambohimanambola dia nomeny an'Andriamasinavalona izay zandry olona.
Teo Antananarivo hatrany, Andrianampoinimerina dia nanorina tanàna voahodidina hadivory hoan'ny Andriana, ka teo ambany avaratry ny rovan'Antananarivo,teo Andohalo, no nanorenany izany ka ny Andriamasinavalona, ny Andriandoriamanjaka, ny Andriantompokoindrindra, Ny andriandranando, ny Andrianamboninolona, ary ny terak’i Raberanto avy ao Ambodifahitra no nahazo nonina tao anatin'io faritr'Andohalo voahodidina hadivory io. Ny havan’andriana, ny hova ary ny mpanompo dia tsy nahazo zara-tany sy tsy nahazo nonina tao anatin'io faritr'Andohalo voahodidina hadivory io.
Ara-tantara, teo Masinandriana no nonina i Ranavalotsimitoviaminandriana (voalohan’ny taonjato faha-18). Ireo zanadranavalona taranany nisy nifindra monina nankeo Ambavahady, Vohilahy, ary Andohanosy (telopolotafotsivakilay), samy amin’ny faritra ivelan-kady avaratr’i Masinandriana. Mbola amin’ny ivelankady avaratr’Anosimanjaka, ao Antanivony, no nonina ireo Andrianamboninolona.
Ambohidrazaka[hanova | hanova ny fango]
Ara-tantara, teo antampon’Ambohidrazaka (taonjato faha-18) no nisy ny tanàna fa tato aoriana,ny andriana teo dia nidina teo ambany avaratra, teo Fiakarana.
Ambohijanaka[hanova | hanova ny fango]
Ao anatin'ny rova dia misy fasana efatra mitandahatra avaratra-atsimo ka ny avaratra indrindra dia ny an'i Zazamarolahy taranak'i Ralainanahary, manaraka izany ny fasan'ireo Andriamasinavalona, ary farany eo atsimo indrindra dia ny fasan'ireo Andriana diso.
Ambohidrapeto[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny taonjato faha-18 ara-tantara, teo antampon’Ambohidrapeto ny tànana. Rehefa nilamina ny tany dia nidina tety ambany toerana ny olona ka ireo taranak’andriana teo Ambohidrapeto dia nidina teny ambany avaratra sy ambany avaratra-antsinanana ao Vonelina sy Marobiby. Arak’izany, toy ny teo Ambohidrazaka, ny andriana dia amin’ny ambany avaratra amin’ny vohitr’andriana no mifindra monina raha ivelankady amin’ny vohitr’andriana niaingana no manorimbohitra.
Nahorin'ny Mpanjaka Andriamangarira (1725-1775), zafin' Andriamasinavalona, Mpanjakan' Imerina (1675-1710) ny tanàna ary nodidininy hadivory fito sosona. Ao anaty rova, eo amin'ny zoro avaratra antsinana anaty rova no misy ny fasana fito miandalana an'dRabodozafimanjaka sy ny fianakaviany, Rabodozafimanjaka izay isan'ny 12 vavy vadin'Andrianampoinimerina. Amin'ireo fasana fito miandalana ireo izay mitandahatra avaratra-atsimo dia ny fasan'i Rabodozafimanjaka no avaratra indrindra. Ny fasan'Andrianamboatsimarofy kosa dia eo afovoan'ny rova ary atsimo andrefan'ny fito miandalana. Akaikin'ny fasan'Andrianamboatsimarofy kosa ny tranokotona misy efitra roa avaratra sy atsimo izay natao ho fampinonoana ny zanak'andriana ka ao amin'ny efi-trano avaratra amin'izany trano izany no omena nono ny zanak'andriana. Ny fasan'ny mpanjaka Andriamangarira kosa dia ivelany sy avaratry ny rova nahorin' Andrianampoinimerina saingy anatin'ny faritra voadidina hadivory hatrany. Eo akaikin'ny fasan'Andriamangarira kosa ireo hazon'andriana roa mivady dia ny hasina sy aviavy ka ny hasina eo avaratra ary ny aviavy eo atsimo, maneho fa ny hasina no ambony karazana mihoatra amin'ny aviavy.
Raha nanao fizara-tany teo Antsahadinta i Andrianampoinimerina dia ny avaratr’Antsahadinta rehetra no nomeny ny taranak’i Rabodozafimanjaka vadiny. Ary mbola amin’io avarabohitra io no misy an’Ivatobe, vohitry ny tera-dRangorinimerina sy Ambohitrontsy.
Ny taranaky ny Mpanjaka Andriamangarira kosa dia tsy eo Antsahadinta intsony fa nifindra eny Ambohitsoa, Miadanimerina, Finaritra, Miantsoarivo-Behenjy ary Ambohimandroso gara izany.
Imeritsiatosika[hanova | hanova ny fango]
Ara-tantara, nanao fanekem-pihavanana teo Andrianampoinimerina (1787-1810) sy i Andriamamy mpanjakan’Arivonimamo ( voalohan’ny taonjato faha-19 aorian’i Jc) ka samy namboly hazom-piandrianana (amontana) izy roa ka ny an’Andrianampoinimerina novoleny tamin’ny ilany avaratra ary ny an’ny mpanjaka Andriamamy izay nanoa kosa tamin’ny ilany atsimo. Voamarina indray eto fa tsy kisendrasendra ny fizaran-tany nataon’Andrianampoinimerina tamin’ireo tendrombohitra 12 hafa.
Ny atsimo amin’ny vohitr’andriana[hanova | hanova ny fango]
Ny atsimo amin’ny vohitr’andriana kosa dia izao no hita:
Ambohibe: eny ambany atsimo ivelan-kady, akaikin’ny fatsakana, no nonina ireo mpanompo.
Ambohidrabiby: ny atsimondrova sy atsimombohitra dia zara-tany nomen-dRalambo ny Ambodifahitra. Raberanto avy ao Ambodifahitra dia nataon’Andrianampoinimerina ho isan’ny zanadralambo. Ny antsinanandrova sy antsinanambohitra no zaraa-tanin’ny hova. Ny andrefandrova sy andrefambohitra no zara-tanin’ireo mpanompo izay maro no nifindra monina nanorina an’Antanambao, tànana eny atsimo andrefana’Ambohidrabiby.
Ambohimalaza: Eo Antandrokomby, toerana eo ampita atsimo antsinanan’Ambohimalaza, ny fasan’ireo hova sy hova manila andriantompokoindrindra.
Antananarivo: ny atsimondrova sy atsimombohitra dia zaratanin’ny olo-mainty.
Anosimanjaka: ao atsimo andrefambohitr’Anosimanjaka, ao Miadampahonina sy Morafeno, ny tanànan’ireo olo-mainty. Ao Antamboho sy Ambatolampy, atsimo- antsinanambohitr’Anosimanjaka ny tanànan’ny Antehiroka.
Ilafy: eo atsimombohitra no nonina ireo olo-mainty.
Ny avaratra sy ny avaradrova ary ny avarabohitra[hanova | hanova ny fango]
Fonenana amin’ny avaradrova sy avarabohitra[hanova | hanova ny fango]
Marihina fa ny fandaminana ny fonenana amin’ny vohitr’andriana dia nohajain’ny ntaolo fatratra amanjato taona maro. Nanomboka tamin’i Radama I (1810-1827) ary indrindra tamin’ny Ranavalona I (1827-1861) dia nisy hova avo razana afaka nonina amin’ny avaradrova sy avarabohitra amin’ny tendrombohitra 12. Rainilaiarivony praiminisitra moa dia ninia nanao ny lapany teo avaratry ny rovan’Antananarivo ary ambonin’Andohalo ary nohininany ho "Andafiavaratra" ny fiantso izany ho fanamarihany fa manomboka aminy dia tsy ny andriana irery intsony no mahazo monina amin’ny avaradrova sy avarabohitra amin’ny tendrombohitra 12. Nanomboka tamin’ny taonjato faha-19 koa anefa dia nisy andriana nonina tamin’ny andrefandrova teo Antananarivo. Hatramin’ny taona 1896 anefa no nihamaro ireo taranaka hova na mpanompo namelomaso, nangataka sy nividy tany tamin’ireny avaradrova sy avarabohitra amin’ny tendrombohitra 12 ireny ka lasa iray tokotany amin’ireo taranak’andriana efa nonina teo amanjatotaona.
Ny hasin'ny avaratra[hanova | hanova ny fango]
Eto ampamaranana, talohan’ny taona 1817, ny ivo sy ny avaradrova ary ny avarabohitra amin’ny vohitr’andriana misy rova dia natokana honenan’ny andriana. Amin’ny lovantsofina maro dia mifamatotra amin'ny fahefana sy fahamboniana ny zoro avaratra. Ohatra, raha niavona Ravadifo fa andriambavy izy fa tsy olom-poana dia niaka-pofona ny mpanjaka Andrianjaka (haka azy ho vady) fa izy Andrianjaka no mpanjakan'ny vohitra eo avaratry ny misy an-dRavadifo. Moa tsy midika fanambonian-tena lehibe izany teny fohy nataon'Andrianjaka izany, zary miteny fotsiny hoe "avy etsy avaratrao no misy ahy"? Tsy nanan-kambara intsony Ravadifo naheno izany fa nanaiky.
Ary moa tsy nanao hevi-dalina hahafantarana izay zafikeliny mendrika hampanjakaina ny mpanjaka Andriambelomasina teo Ambohimanga? Novelarana tsihy tao an-dapa ary navory sy nampatoriana tao ireo zafikeliny lahy rehetra ary nohidiana ny lapa. Ary rehefa sondrian-tory ireo zafikeliny dia nojerena ka tamin'ireo dia Andrianampoinimerina irery no nisondro-mandry nianavara-doha. Ka loa-bava Andriambelomasina nahita an'Andrianampoinimerina resin-tory ka nilaza hoe "lay lahifotsy ity no tompon'ny farany fa izy no misondro-mandry mianavara-doha".
Ary ny amin'ny fomba fanao hafa kosa, raha mamono volavita amin'ny fandroana, moa tsy amn'ny ilany avaratra amin'ny kianja no ametrahana ny ilan'ny havia amin'ny omby natao hoan'ny Mpanjaka, fa amin'ny ilany atsimo amin'ny kianja kosa no ametrahana ny ilan'ny havanana amin'ny omby izay natao hoan'ny vahoaka?
Ary amin'ny vohitra kosa, ny andriamanjaka dia tsy miditra amin’ny vavahady atsimo amin’ny vohitra fa amin’ny vavahady avaratra antsinanana na avaratra andrefan’ny vohitra. Ary ny rova aza dia misy vavahady kely roa hidirana sy hivoahana aminy ka ilay eo amin’ny lafiny avaratra amin’ny rova no idirana sy ivoahan’ny Andriamanjaka.
Ary "ny avarapianarana" fanafohezana ny fitenenana hoe "ny ao avaratra no fianarana" no niantsoana ny olona nianatra.
Fa ny mampieritreritra indrindra raiketin'ny boky Salamo faha 48 andininy faha-2, boky izay nampiasain'ny Jiosy sy Silamo ary Kristiana efa aman'arivo taona manao hoe: "Avo mahafinaritra, fifalian'ny tany rehetra, ny tendrombohitra Ziona, Eo amin'ny ilany avaratra, Tananan'ny Mpanjaka Lehibe, Andriamanitra ao an-tranon'andriana ao dia nanao izay ahafantarana azy ho fiarovana avo". Moa izany filaza izany tsy midika fa amin'ny Jiosy sy Silamo ary ny Kristiana koa dia ny avaratra no toerana mendrika sy avo? Anefa filazan'ny Ntaolo Malagasy koa ny hoe "Avo tany avaratra" sy "Avara-patana". Kisendrasendra va re izany sa taranaka jiosy sy silamo ary kristiana tokoa ny Malagasy na iray ihany ny Andriamanitry ny Malagasy sy ny Andriamanitry ny Jiosy sy Silamo sy Kristiana?
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vohitr%27Andriana&oldid=998330"
Voaova farany tamin'ny 30 Oktobra 2020 amin'ny 14:55 ity pejy ity.